Ithegi: imifanekiso | Martech Zone
Intengiso kuYouTube: Kutheni kusasele kufuneka!
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 22, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Besibambe indibano yengingqi yeepodcasters eofisini yethu ukuxoxa ngokwanda kwevidiyo kwipodcasting. Yayiyingxoxo engakholelekiyo- ukusuka kwitekhnoloji entsha, kwimiceli mngeni kwezobuchwephesha, ukuya kumaqhinga okwenene exesha levidiyo. Kuzo zonke iincoko kwakungekho mbuzo ubuziweyo, ngaba kufanelekile ukuba senze ividiyo? Endaweni yoko, yayi malunga nendlela esinokuthi senze ngayo ividiyo ukuze ihambisane nemizamo ye-podcasting yeyona ndlela isebenzayo. Njenge podcaster enye, uChris Spangle, iaudiyo kunye nevidiyo